Ciidamo Aruursi Ka Socda Xaafado Katirsan Muqdisho iyo Weerarkii C/Raxmaan Cabdi Shakuur Oo Hardan Qabiil Ka Dhax Abuuray Dowladda Federaalka [Warbixin].
Monday December 18, 2017 - 19:58:24 in Wararka by Super Admin
Xiisada colaadeed oo aad udran ayaa lagasoo sheegayaa xaafado katirsan degmooyinka Gobolka Banaadir kuwaas oo daba socda iska hor'imaad khasaara badan dhaliyay oo xalay ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Wararka la helayo xaafado katirsan degmada Hodon ayaa sheegaya in dhaq dhaqaaqyo ciidan oo iskasoo horjeeda ay wadaan ciidamo kawada tirsan dowladda Federaalka balse qaab beeleed u abaabulan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamo taageersan Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur iyo Cabdi Xakiim Fiq ay isku aruursadeen xaafadaha Afrikaan Village,Haanta dheer iyo Saybiyaano.
Odayaal dhaqameedyo kasoo jeeda mid kamida beelaha Muqdisho ayaa ku eedeeyay dowladda Federaalka in si gaar ah siyaasiyiinta beeshooda ubeegsanayso sidaas daraadeed ay ku qasbanyihiin in ay is difaacaan.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in Xasan Cali Kheyre uu amar kusiiyay maleeshiyaad ay isku heyb yihiin in ay tallaab adag ka qaadaan xildhibaanno iyo siyaasiyiin kasoo jeedo deegaannada Galmudug kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay waday dhaq dhaqaaqyo ka dhan ah Farmaajo.
Nin lagu magacaabo Jacfar oo Kheyre umagacaabay Taliyaha ciidamada xasilinta Caasimadda ayaa la sheegay in uu mas’uul ka ahaa weerarkii xalay saq dhexe lagu qaaday hoyga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur waxaana weerarkaas ku dhintay 4 askari oo ilaala u ahaa.
Isloow oo ah wasiirka ammaanka DF-ka oo maanta warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in tallaab laga qaadi doono siyaasiyiin uu ugu yeeray Qaran Dumis isagoo xaqiijiyay in iyagu ay mas’uul ka ahaayeen weerarkii Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur.
Sidoo kale xukuumadda Kheyre ayaa mamnuucday in Hoteellada magaalada Muqdisho ay marti geliyaan shirar aan fasax looga heysan Villa Somalia.
Tallaabadan ayay dadka mucaaradsan DF-ka ku sheegayaan caburis aan horay loo arag islamarkaana Farmaajo uu adeegsanayo siyaasad u qaab eg siyaasaddii Siyaad Barre.
Xilligii ay jirtay dowladdii Kacaanka siyaasiyiintii lagu helo iyagoo ababulaya shirar dowladda ka dhan waa ladili jiray ama waa laxiriri jiray.
Cadi Raxmaan Xoosh oo ah wasiirka Dastuurka dowladda Federaalka ayaa kasoo horjeestay amarka kasoo baxay wasaaradda amniga wuxuuna ku tilmaamay mid sharci darro ah "Waxaan hadda daawaday shirkii Jaraa’id ee Wasiirka Amniga Gudaha Mr Islow oo uu ku yiri Cidna shir gaar ah ma qabsan karto, iyadoo aysan fasax ka heysan dowladda, hagaag, taasi waa qalad, Dastuurka ayaa u ogolaanaya Xoriyadda ah in cid walba ay qabsan karto shirar iyo isu imaadyo”ayuu yiri Wasiir Xoosh oo intaa ku daray in qodobka 16aad iyo 20aad ee Dastuurka u ogolaanayo.
Dadka Falanqeeya arrimaha maamullada dabadhilifyada ah ee kajira dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in khaladkii ugu weynaa ay ku tallaabsadeen Farmaajo iyo Kheyre waxayna si aan ka fiirsasho laheyn ubeegsanayaan siyaasiyiin awood beeleed ku leh muqdisho iyagoo ku eedaynaya Tuhmahada ‘Qaran dumis’ oo qudheeda macna badan yeelanaysa.
Dhisiddii maleeshiyaadka ‘Xasilinta caasimadda’ ee hub ka dhista ku sameynayay qabaa’illada Muqdisho ayaa mar ku sigtay in dowladda Federaalka ay goradda geliso dagaal ahli ah balse markii dambe ayay arrinkaasi ka waantoowday.